दलहरुलाई सचेत गराउँदै प्रथम राष्ट्रपतिले भने-संविधानको पूर्ण स्वामित्व लिएर अघि बढ्नुस् spacekhabar
प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादबले संविधान कार्यान्वयनको अबस्था सन्तोषजनक नभएकोतर्फ राजनीतिक दलहरुलाई सचेत गराउँदै संविधानको पूर्ण स्वामित्व लिएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानद्धारा आइतबार आयोजित नेपालको संविधानको पाँच बर्ष बिषयक छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै डा. यादबले हिजोका दिनमा प्रमुख तीन दलको अग्रसरतामा संविधान जारी गरिएको स्मरण गर्दै अहिले पनि तिनै शक्तिहरु राजनीतिको केन्द्रमा रहेकोले यसको कार्यान्वयनमा दलहरुको प्रमुख जिम्मेवारी रहेको उल्लेख गरे।
बिधायिकालाई कमजोर बनाइएको, न्यायपालिकामाथि औलो उठाइएको तथा दल बिभाजन र संवैधानिक परिषद् गठन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर कार्यपालिकासमेत बिबादमा तानिएको उल्लेख गर्दै डा. यादबले यस्ता गतिबिधिले लोकतन्त्रको खम्बा कमजोर बनाउने प्रष्ट पारे।
सरकारले संवैधानिक निकायको क्षयिकरण गरेका बेला उसलाई लोकतान्त्रिक बिधि अनुसार हिडाउनका लागि प्रतिपक्षीको भूमिका प्रभाबकारी नभएको उनको भनाई थियो। संसदमा उपसभामुख पद रिक्त भएकोतर्फ संकेत गर्दै डा. यादबले संविधानमा व्यबस्था गरिएको यो पद किन रिक्त रह्यो भन्ने प्रश्न गरे।
उनले सञ्चार माध्यमलाई संकुचन गर्ने र नागरिक स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउनु लोकतन्त्रका लागि सुहाउँदो काम नभएको बताए।
परिबर्तनका एजेण्डामा जिम्मेवार नेताहरुले नै प्रश्न उठाएकाप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले धर्मनिरपेक्षता लगायतका बिषयमा अपनत्व लिएर अघि बढ्नुपर्ने बताए। संविधानमा मधेशी, आदिवासी लगायतले देखाएको असन्तुष्टी सम्बोधन गर्दै सर्बस्वीकार्य बनाउनु दलहरुकै जिम्मेवारी भएको राष्ट्रपति यादबले उल्लेख गरे।
प्रकाशित मिति: आइतबार, असोज ४, २०७७, ०८:१८:००